Kungani i-Ls Vision 4MP IP DoME ikhamera ingasebenzi ngaphandle?
Uma ufuna CCTV ukuthi ephelele bamba zokusebenza nangaphandle zokuphepha, sincoma ukuthi LS UMBONO Saturn Series Came ...
Uma ufuna amakhamera okuphepha alungele izinhlelo zokuphepha ezingaphakathi nangaphandle, sikuncoma wenaIkhamera ye-LS Vision Saturn SeriesI-LS-S2400D, le yikhamera ye-IP ye-IP yangaphandle eza ne-Varifocal 2.8mm-12mm Lens. Kuyikhamera yobuchwepheshe, e-High-end dome isebenzisa i-HI3516D + OV4689 Hardware Design ukuhlinzeka ngevidiyo yokuthwebula, ukufaka ikhodi, nokusakazwa. Ngaphezu kokunikeza ividiyo ecacile yekristalu ngekhwalithi ephezulu yesithombe (4-megapixel resolution), le khamera iyakwazi ukuhlinzeka ukuthembeka okungcono nokuqina lapho kuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe.
Ini's umehluko phakathi kwe-LS-S2400D nabanye?
LS-S2400D iyona esikhundleni kuhle Hikvision futhi DahuaI-4MP Outdoor IR amakhamera we-dome, le khamera ingaletha ikhwalithi efanayo yekhwalithi ephezulu yesithombe esiphakeme ngokusebenzisa i-Omnivision 1/3 intshi 4 I-MEGAPAPIXEL CMOS Image inzwa nge-Hynamic Range Image inzwa nge-Hary Range Range Ngaphezu kwalokho, ikhamera yamukela umklamo we-IP67 olinganiselwe i-IP67
Ngokungafani nezinye ezishibhile4 Amakhamera we-Megapixel IP, Amakhamera wethu we-Super HD Series IP eza nesibonisi esisebenziseka kalula sewebhu, evumela abasebenzisi ukuthi basetha ikhamera ngokushesha futhi kalula. Inhloko yayo ekhanyiselwe infrared inomklamo olungiselelwe ukugwema ukuboniswa okwenziwe nge-infrared, ukuze ikhamera ikwazi ukuletha izithombe ezisezingeni eliphakeme ngisho nokusebenza ebusuku. module yayo ikhamera ubamukela 4 Axis isakhiwo mechanical, okuvumela Ukujikeleza mpo futhi enezingqimba wokuthola enhle yokubuka engeli izicelo Iyahluka kuya isiqophi ukuqapha.
Ifakwe ngama-4 ama-PC are-infrared array arenfled array linatilinators anganikeza amamitha angama-30 amamitha ubusuku ibanga lokubuka ebusuku. Ibhodi le-IR-ukukhanyisa lingasuswa kwimodyuli yekhamera, ukuze abasebenzisi bakwazi ukulungisa kalula i-lens. I lens ayihlomele kuyinto 4-megapixel IR Vari-ebalulekile lens camera ukuthi ukusekelwa F1.4 beso, futhi ingafinyelela licacile kuzo zombili ukukhanya ongaphakeme elikhanyayo, izimo osukwini-ukukhanya.
PHAMBI I-LS Vision yethula amakhamera wezokuphepha e-New Panovamic
I-LS Vision New Edition LTE 4G Wireless Amaphoyisa e-WiFi Caperas Camera OLANDELAYO